फिलिपिनी केटी मरिना भन्छिन : दुबईमा नेपाली युवाहरुको प्यास मेटाउछु…..पूरा पढ्नु होस । - Taja Report
Homeरोचकफिलिपिनी केटी मरिना भन्छिन : दुबईमा नेपाली युवाहरुको प्यास मेटाउछु…..पूरा पढ्नु होस ।
फिलिपिनी केटी मरिना भन्छिन : दुबईमा नेपाली युवाहरुको प्यास मेटाउछु…..पूरा पढ्नु होस ।
September 1, 2018 रोचक Comments Off on फिलिपिनी केटी मरिना भन्छिन : दुबईमा नेपाली युवाहरुको प्यास मेटाउछु…..पूरा पढ्नु होस ।
मेरो नाम मरिना याची म इन्टर पास गर्ने बित्तिकै साथीहरुको लहैलहैमा लागेर बिदेशमा काम गर्नभनि दुबईमा पुगेकी थिए । हुनत दुबईको एक प्रतिष्ठित मेग मार्केटको क्यासियरको काम थियो र तलब पनि राम्रो नै
थियो। तर दुबई जानुभन्दा पहिला देखि नै मलाई यहा फिलिपिन्समा जस्तो रमाईलो गर्न पाईदैन होला सधैं चिन्ताले सताइ रहेको थियो सधैकाम काम भन्दा भन्दै दुई बर्ष बिना मस्ति नै बिताउनु पर्ला भन्नेलागि रहेको थियो। हुन पनि मुस्लिम देशमा नियम कानुन कति कडा हुन्छ भनेर साउदी तिर गएर आएका मान्छे हरुले भनेका थिए जे होस मेरो मन मिल्ने ३-४ जना साथीहरू पनि यहि क्यारिफोरमा नै काम गर्ने भएका ले म केहि ढुक्क थिए।
फिलिपिन्स मा हुदा मैले १५ बर्ष देखि नै केटा साथि हरु संङग सम्बन्ध राख्दै आएकी थिए । आज १९ बर्ष हुदा सम्म मेरो २ जना केटा साथि हरु संङग सम्बन्ध गासी सकेको थियो। मेरो घनिस्ट केटा साथि हरु सङग मेरो सबै थोक चल्दथ्यो जस्तो कोहि पति पत्नि। तेसैले मेरो बेला बेला मा काम तृस्णा मेट्नको लागि फिलिपिस्मा मा कुनै दुख थिएन।
तर यहा दुबईमा आएपछि १-२महिना सम्म त मैले कुनै केटा मान्छे सङग बोल्न पनि पाएकी थिईन। संगै काम गर्ने नेपालीहरु कहिले काहि काम बिशेष ले बोल्ने गर्थे नत्र अरुकोहि थिएनन्। समय बित्दै गयो १ दिन नेटमा यहि लुकेको समाजमा भएका कथा अँग्रेजीमा अनुवाद गरी पढि रहेकी थिए एउटा कथा दिपक थापा ले लेखेको रहेछ जो नेपाली थियो ।।कथा पढदा उ पनि डुबैमा नै बस्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। ऊसले बिना हिचकिचाहट आफ्नो ईमेल आईडि पनि
[email protected] भनेर लेखेको रहेछ। र केटि साथि हरुखोजि रहेको पनि लेखेको रहेछ। मैले नै चेक गर्न १ दिन मेल गरे र फोने नम्बर पनि लेख्नभने। मेल को तुरुन्त रिप्लाई आयो र साथ मा फोन नम्बर पनि। मैले १ दिन फोन गर्ने हिम्मत गरेकि थिए तर १-२ रिङग जदैमा फोन काटिदिए। त्यो दिन त्यसै भयो भोलि दिन मा हो क्यारे उताबाट फोन आयो।
त्यो दिन उसले सोध्यो ईङ्लिसमा यो नम्बरबाट मिस कल आएको थियो केहि मदत गर्नसक्छु कि भनेर। मैले भने होइन नम्बर दिपक जि को हो कि होइन भनेर खाली चेक् मात्रै गरेकी हुँ भनि । उस्ले आफु दिपक नै बोलेको हु भन्दैयो नम्बर कहा बाट पाएको भन्न थाल्यो। मैले पहिला त भनि दिय कि सथिहरुलेदियेको तर फेरि भने कि तपाई ले नै मेल मा पथाउनु भको नि अब उस्लाईअडकल लगाउन धेरै बेर लागेन। र सिधै भन्न थाल्यो कि कुनै दिन भेटु न।
मैले भने तपाईको जस्तो कहा फुर्सद छ र मेरो त सुक्रबार पनि काम चल्छ भने। उस्ले भन्यो फुर्सद वा बिदा को दिन मा त भेटगर्नै पर्छ भनेर जिद्दि गर्न थाल्यो। हुन पनि मेरो त्यतिबेला काम पनि प्रार्य सधै नै फुल थियो १ हप्ता हामिले फोनमा नै कुरा गरेर बितायौ। फेसबुक बाटपनि च्याट गर्न थालेका थिएए। फेस बुकका फोटो हेर्दा उ निकै ह्याड्सम त्यस्तै२४-२५ बर्सको देखिन्थ्यो।
पेसा ले उ मेकानिकल ईन्जिनियरिङ गरेको भन्थ्यो। कुनै फ्याक्टृ मा टेक्निकलसपोर्ट को काम गरि रहेको थ्यो। १ महिना पछि होला, त्यस्तै ईद को ४ दिनपछि मेरो पनि ईदको छुट्टि ३ दिन हुने भयो। किनकि इदमा त हाम्रो फुल ड्युटि भएको थियो। मैले नै भने म ३ दिन फ्री छु। अब उस्ले नै कर् गर्नथल्यो जसरी भए पनि भेट्ने भनेर।
मैलेपनि हुन्छ भने। मलाई पनि लगभग ५ महिना त्यस्तै बिताउन गर्हो परि रहेको थियो। भोलि पल्ट उस्ले १२ बजे पछि दुबई कै कुनै नेपालि होटेल मा भेट्ने कुरा गर्यो मैले पनि हुन्छ भने।मलाई त्यो रात किन हो किन निदाउन धेरै गार्हो पर्यो। हामि आखिर त्यो नेपालि होटेल को १ स्पेसल रुममा
डुबै जना एक आपसमा मिलायौ । हुन पनि उ त्यतिकै ह्याडसम रहेछ। म पनि निकै खुशी थिए । बाकि कुरा जे जे भए पनि उस्ले नै कुरा आगडि बदाउडै मेरो नजिकै टासियर बस्न आयो।हामि डुबै को मान्सिकता मा नै आजपुरा काम तृस्णा मेट्ने चाहाना भएको ले हामि लाई त्यति असहज लागेको थियन।उस्ले नै भन्यो तेसो भए ५ महिना देखि सुक्खा नै हो? मैले भने मेरो तहो तपाईको नि उस्ले नि भन्यो २महिना भयो मेरो पनि त्यस्तै हाल् छ।
अब का दिन हरु भने धेरै तड्पियर बिताउनु नपर्ने भो भन्दै मेरो स्तनमाथि कुहिनो राखेर धक्का दिन थाल्यो. मलाई कताकता काउकुती लागि रहेको थियो र मेरो आङ पनि सिरिङ्ग भईरहेको थियो । सायद धेरै महिना मा कोहि केटा मान्छे देखेर होला। म भरखर १९ वर्षपुगेकी तरुनी युवती भएकी र ५ महिना सम्मकोहि केटा को स्पर्स नपाएर हो कि किन हो मलाई कस्तो कस्तो अनुभव भइरहेको थियो ।मेरो स्तन पनि ठूलो र साह्रो थियो । मैले स्तनमा कसिलो ब्रा लगाएको हुँदा मेरो
टिसर्टबाट स्तन माथि उठेको थियो । पुष्ट स्तन भएकोले उसको कुहिनोले मेरो स्तनमा धक्का दिदाँ मलाई कताकता आनन्द भए जस्तो लाग्न थाल्यो केहि बेर पछि दिपक लाई पनि खपी नसक्नु भइसकेको रहेछ । उसले त अव कुहिनोले स्तनमा धक्का दिन छोडेर दुबै हातलेमेरो कसिलो स्तन माड्न थाल्यो । अब भने मलाई पनि खपी नसक्नु भयो ।मेरो पानी बगेर मेरो पेन्टी पुरै भिजेर मेरो पेन्टीमा समेत लाग्न थाल्यो ।
उसले मेरो स्तन माड्दै मेरो टिसर्ट खोल्यो अनि कोठाको ढोका लगायो र मलाई विस्तारै ओछ्यानमा सुतायो ।उसले मेरो पेन्टी पनि खोलिदियो । अबमेरो शरीरमा लुगा टु पीस मात्र बाकी रह्यो । उसले मेरो रातो ब्रा भित्र रहेको ठूलो र माथि उठेको कसिलो स्तन एकटक हेर्यो र उसको हातले मेरो हात समाती यौन सम्पर्क राख्यो ।
यसरी नै दिपक संग नियमित हाम्रो सम्बन्ध रह्यो बिस्तारै दिपकको साथैहरु संग चिन् जान भयो त्यसपछि दिपकको साथीहरु संग पनि त्यसरी नै प्यास मेटाउन थाले दिपक लगायत उसको साथीहरुले एक चोटी प्यास मेटाएको बापत २०० दिह्राम देखि ५०० दिनार सम्म दिन्थ्यो र होटलको खर्च लगायत खानेकुराहरुको सबै उनीहरुले नै तिरी र्दिन्थ्थ्यो बिस्तारै यसरी नै दीपक को साथीबाट साथी गर्दा गर्दै अहिले मेरो करीब नेपाली युवाहरु ३०० जनालाइ प्यास मेटाईरहेकी छू साथमा कमाइ पनि राम्रै भैरहेको छ
(फिलिपिनी भाषा बाट नेपालीमा अनुबाद)
छोरी बेपत्ता,घर परिवारमा यस्तो रुवाबासी,खोजि दिन परिवारको आग्रह…[ भिडियो सहित ]
छाला चाहुरि पर्यो, तन्नेरी देखिने घरेलु उपाए यस्तो छ जानी राखौं > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (219)
दाँतको किरा मार्न र दुखाई कम गर्न अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय!!जानी राखौ (108)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (66)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (47)
क्यान्सर रोगिको लागि खुशीको खवर ! घरमै बसेर जम्मा १६ रुपैयामा यसरी गर्नुस् उपचार (42)